Yaanu Nahay – Somaliland First
DAN-QARAN (Somaliland-First) waa dhaq dhaq ay abaabuleen muwaadiyiin Somaliland oo dalka gudihiisa iyo dibadiisa ku nool. Waxaanu nahay muwadaniyiin wanaag la raba dalkooda, isla markana isku bahaystay fikrada ah DAN-QARAN. Ujeedaduna ay fikradani ku soo arooraysaana waa:-
In Somaliland hesho Aqoonsiga caalami ah.
In muwaadiniinta Somaliland noqdaan shicib midaysan, isna aaminsan oo ay ka go’an tahay horumarka dalkooda, meelana uga soo wada jeeda cadawgooda.
In dalka Somaliland noqdo mid si dhab ah, u wada leeyihiin muwaadiniintiisu, sidoo kalena muwaadiniinta Somaliland si buuxda u helaan Cadaalad, Nabadgalyo iyo Barwaqo waarta.
Waxaa laga yaaba in dadka (qaarkood) ee ku nool qarada Europe iyo Maraykanku ay la xidhiidhiyan fikrada ah (Country-first) ururoda dalalkaasi ka jira ee Ajaanibka ah iyo dadka laga tirada badan yahay neceb. Lakiin, aragtida Somaliland-First, waxaa ku arooraysa wanaag iyo in qofku uu marka hore naftiisa jecel yahay oo uu wanaag la rabo, kadibna xaafadiisa, kadibna dalkiisa. Qofku marka uu wanaag naftiisa la rabo ayuu raad sanayaa shaqo uu lacag xalaal ka helo. Markaasi ayuu waxbarashada naftiisa iyo caruurtiisa ku dadaalaya, markaasi ayuu cafimaad iyo guri fiican oo uu ku noolada ku hamiyayaa. Dalkuna sidiisaba waxaa uu horumar gaadha marka qofkastaba uu isagu naftiisa uu horumar la rabo.
Aragtida DAN-QARAN (Somaliland-First) waxay xanbarsan tahay in ayna dawladnimadu ahayn mid u adeegta SHAQSI xukun doona ama dhaqlo doona. Ama Beel doonaysa in ay xukunka dalka ka taliso. Lakiin ay tahay danka Qaranka ee ummada oo dhan ka dhaxaysad sidii loo fulin lahaa. Waxaa fikradi xanbarsantahay in gacmaha la isqabsado oo danta qaranka loo midoobo, waxii taasi ka baxsana ayna Somaliland ka soconaynin.
Haddaba, haddii aad tahay muwadin danaynayaa siddii ay Somaliland u noqon lahayd “Xidigta Qarada Afrika iyo Calamkaba ka iftiinta”, ama haddii aad tahay muwadin danaynaya wanaaga dadkiisa iyo dalkiisa. Marka, waxaan kaa codsanynaa in aad marka hore tageertid firadani ah “Toosinta iyo saxida seeska dawladnimo ee Somaliland”. Kadibna aad ‘ku-qasabtid’ masuuliyiinta aad dooratay ama aad dooranan doonto (Haddii EEBE yidhaa) in ay iyaguna tageeran kana hawl galan sidii fikradani ka kooban 10 qodab ay dalka uga hirgalin lahaayeen.
AAAAAAD AYAAD U MAHADSAN TIHIIN.
2)Haddii aad Saxiib wanaga Somaliland aad tahay, oo tageersan Dib-U-Habaynta Somaliland Riix HALKANI